| NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း »
SoCal အငှားဌာနများတိုက်ရိုက်ပွဲ ProAV, အသံလွှင့်မောင်း Aja Ki Pro ကို Ultra နှင့်ပိုမိုအတူနဲ့ Reality TV ကိုထုတ်လုပ်မှု
SoCal အငှားဌာနများထုတ်လွှင့်, အဖြစ်မှန်တီဗီ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် AV စနစ် / အဆင့်တွင် clients များပေး 2008 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည် အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုအသံ, ဗီဒီယိုနှင့်ထုတ်လုပ်မှု-တိကျတဲ့အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြေရှင်းချက် LED, ပစ္စည်းကိရိယာများငှားရမ်းခြင်း, ကျွမ်းကျင်သူနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု, စီမံကိန်းကိုအတိုင်ပင်ခံနှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းအတူ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမကြာသေးမီက 12 ကဆက်ပြောသည် Aja Ki Pro ကို Ultra ပြီးသား Fido ဖိုင်ဘာရာပေါင်းများစွာနှင့် Hi5 SDI ဖို့အပါအဝင် Aja ဂီယာ၏ကြီးမားသောပမာဏပါဝင်သောသူတို့ရဲ့အငှားရေကူးကန်သို့ HDMI mini-converter, 30 Ki Pros, 20 Ki Pro ကိုထိန်သိမ်း, မျိုးစုံ FS1 နှင့် FS2 ဘောင် synchronous, KUMO routers နှင့်ပို။
"ကျနော်တို့ကအစဉ်အမြဲသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက် Aja ထုတ်ကုန်ပိုမိုနှစ်သက်ပါတယ်။ အဆိုပါငှားရမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဂီယာအမှန်စမျးနှင့်လည်ပတ်-ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Aja ဂီယာပိုမိုတာရှည်ခံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ဖို့သက်သေပြခဲ့သည်, သူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုထူးချွန်ဖြစ်ပါတယ်အတွက်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်, "အဲရစ် Broderson, တည်ထောင်သူ, SoCal အငှားဌာနများကဆိုသည်။
12 Ki Pro ကို Ultra ၏ကုမ္ပဏီ၏မကြာသေးမီကဝယ်ယူ 4K အတွက်အလုပ်လုပ်နေထုတ်လွှင့် clients များဝန်ဆောင်မှုပေးမည် UltraHD"ကျနော်တို့က 4K flypack တည်ဆောက်ခြင်းနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စံချိန်အရင်းအမြစ်အဖြစ် Ki Pro ကို Ultra ကို အသုံးပြု. ရသည်။ ki Pro ကိုက Ultra 4K Workflows များအတွက်တကယ့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်သူတို့နှစ်ဦးကိုတစ်ဦးထိန်သိမ်းသို့ဿုံ side-by-side fit သောလမ်းစူပါအဆင်ပြေပါတယ်။ Built-in LCD မျက်နှာပြင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးနှင့်လာမည့် Pak-Adapt-eSATA option တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် လွန်စွာလိုလားသော DNxHD နှင့် DNxHR ထောက်ခံမှုကျနော်တို့လွန်းအကြောင်းကိုတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေ features တွေနေကြတယ် "ဟု Broderson ဆက်ပြောသည်။
4K ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုတိုးပွားလာဝယ်လိုအားနေသော်လည်းဘဏ်ဍာအမြဲပိုပြီးစျေးကြီးဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖို့ဘတ်ဂျက်မရှိဘူး။ Broderson ကျနော်တို့ 4K ချင်ပေမယ့်နေဆဲတစ်ဦးအပေါ် operating သူ clients များတွေ့မြင် "ကရှင်းပြသည် HD ဘတ်ဂျက်နှင့်သူတို့ပုံမှန်ကြီးမားသော rastersize ကုန်ကျစရိတ် overhead ကိုရှောင်ကြဉ်ချင်တယ်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေးပို့အဖြစ် Apple က ProRes ဖိုင်တွေကိုလက်ခံလိမ့်မယ်, ပြီးသိသာထင်ရှားသောကုန်ကျစရိတ်ငွေစုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နဲ့နေဆဲထိပ်တန်းအရည်အသွေးပို့ဆောင်စဉ်ကီ Pro ကိုက Ultra အားဖြင့်ငါတို့သည်မိမိတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါတယ် 1080 HD သို့မဟုတ် 4K ဖိုင်များကို။ "
"," ဆယ်ကျော်သက်မေမေ, "" Celebrity Rehab "နှင့်" မိသားစုကုထုံးများပါဝင်သည်ကြောင်းအဖြစ်မှန်ပြပွဲမှငှားရမ်း packages များပေးအပ်ဖို့အပြင် SoCal အငှားဌာနများ '' လုပ်ငန်းတာ MTV Movie, ဆုပေးပွဲများအတွက်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ် ProAV Setup, အ VMAs သည်ဂရမ်မီထံမှလာ, အဆိုပါကလေးများရွေးချယ်မှုဆုပေးပွဲနှင့်ပိုပြီး။
တိုက်ရိုက်လွှဆုပြပွဲများအတွက် SoCal အငှားဌာနများထုံးစံ built နှင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါတယ် အနီရောင်ကော်ဇောကနေ signal ကိုဖြန့်ဖြူးဘို့စာနယ်ဇင်းတံတားများ, စာနယ်ဇင်းအခန်းတစ်ခန်း, စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်နှင့်ပိုပြီး။ ဤရွေ့ကားဖြစ်ရပ်များမကြာခဏယုံကြည်စိတ်ချရသောအချက်ပြထုတ်လွှင့်ဖို့ Aja Fido ဖိုင်ဘာ converters အဖြစ်ရာပေါင်းများစွာကိုအသုံးချရန်။
"ကျနော်တို့ကဒီဂရမ်မီများအတွက်စာနယ်ဇင်းတံတားများပေးနှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူတို့ထဲက 20, ရှိသမျှကို အသုံးပြု. Aja re-clocking Das, Aja ရဲ့ openGear ဘောင်နှင့် HD10AMAs အသံ embedding နှင့် de-embedding လုပ်ဖို့အကြောင်းကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြရတယ်။ အများစုကမှတ်တမ်းတင်, ထုတ်လွှင့် backup လုပ်ထား Feeds နဲ့စာနယ်ဇင်းမှာတဲလှုပ်ရှားမှုများ Ki Pros မှမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ကျနော်တို့, ဗီဒီယိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပြုလုပ်ရည်ညွှန်းထားရာမှ downconvert မှ FS1 ကိုအသုံးပြု HD Analog စရန်။ Aja ရဲ့ FS ထုတ်ကုန်ခန့်မှန်းရခက် client ကိုမကယ်မလွှတ်-၌ဤအမှုကဖြစ်ဘို့ကြီးသောများမှာ HDပါဝင်သောအသံနဲ့ Analog mono အသံ၏ 32 လိုင်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဗီဒီယိုပါဝင်သောအသံ, SD က-SDI နှင့်အတူ -SDI! "
တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်ထုတ်လုပ်မှုမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖိစီးမှုဖြစ်နိုင်ပေမယ် Aja Mini ကို-converter ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Ki Pro ကို, FS နှင့်ကျယ်ပြန့်စုဆောင်းခြင်းအကြားကျွန်တော်အမြဲ "OBTW," သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုပဌနာအဖြစ်, ကယ်တင်သော "အိုးစကားမစပ်" ထုတ်ကုန်ကွောငျးတှေ့နိုင်ပါတယ် တိုက်ရိုက်လွှထုတ်လုပ်မှု၏နောက်ဆုံးနေ့-မောင်းနှင်ကမ္ဘာကြီးသည်ထင်ရသော unsolvable လုပ်ငန်းအသွားအလာစိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုတင်ဆက်သည့်အခါတစ်ဦးအမြန်ပြင်ဆင်ချက်, "Broderson ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
SoCal အငှားဌာနများသူတို့အတ္တလန်တာအတွက်လာမည့်လတွင်ဖွင့်လှစ်အသစ်တစ်ခုတည်နေရာနှင့်အတူကြီးထွားဖို့စီစဉ်ထားအဖြစ် Aja ကိရိယာအစုံသူတို့ရဲ့စာရင်းချဲ့ထွင်ရန်နှင့်ထို့ထက် ပို. မကြာမီဆန်ဖရန်စစ္စကိုနှင့် Las Vegas မှာအတိုင်းလိုက်နာဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကခရီးစဉ် www.socalps.com.
1993 ကတည်းက Aja ဗီဒီယိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုစျေးကွက်မှအရည်အသွေးမြင့်, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောထုတ်ကုန်ဆောင်ခဲ့, ဗီဒီယို interface ကိုနည်းပညာများ, converters အဖြစ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာများတစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ Aja ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မြက်ချိုင့်, ကယ်လီဖိုးနီးယား၌အကြှနျုပျတို့၏အဆောက်အဦမှာအများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့်စနစ်များပေါင်းစည်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်ရောင်းအားရုပ်သံလိုင်းမှတစ်ဆင့်ရောင်းချကြသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်အဘို့, ငါတို့၏ website မှာကြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး www.aja.com .
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-05-31
ယခင်: ခရစ်ယာန် Cabezas တောင်အမေရိကအရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် Lectrosonics ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
နောက်တစ်ခု: Sr; Interactive မှအနုပညာဒါရိုက်တာ